Loozaa Abarraa: Dhaloonni kiyya seenaa akka hojjatu amantaan qaba - BBC News Afaan Oromoo
Loozaa Abarraa: Dhaloonni kiyya seenaa akka hojjatu amantaan qaba
Goodayyaa suuraa Loozaa Abarraa bara 2019 wayoita waancaa argatteetti xabattuu urjii goolii lakkofsiifte turte
Taphattuun garee kubbaa miilaa Itoophiyaa jabduu, Loozaa Abarraa haadhaafi abbaa ishee ijoollee torba godhatan keessa shanaffaa dha. Dhalattee kan guddatees magaalaa guddoo Godina Alaabaa Xanbaaroo kan taate Duraameetti.
Obboolaa dhiiraa angafa lamaafi quxusuu tokko qabdi. Isheenis baayyee daa'ima taatee ture jaalala kubbaa miilaatiin kan qabamte. Isaan boodas ijoollee dhiiraa mandara ishee waliin kubbaa miilaa xabachaa guddatte.
Imalli ishee dirree kubbaa milaa mandarashee Leeliisoo kaasee istaadiyomii Finfinnee ishee bahee Siwuudiiniin ishee gaha jedhee kan yaade jiraachu baatullee keessoon ishee garuu itti hima ture.
Hawaasa dubartiin hojii mana keessaa malee akka warra dhiiraa kan barbaadde rawwachuuf hin dandeenye keessatti guddattus abjushee bakkaan gahachu irraa hin daangessine.
'Ispoortii keessatti hirmaannaa dubartootaa cimsuuf bajata dabalataa barbaachisa'
Dhiiroota waliin xabachuun hinulfaatuu? gaaffii jedhuufi, ''Ana gonkumaa natti hin ulfaanne. Siriiyyu dhiiroonni gareen ani kees jiru keessatti xabachu barbaadu turan'' jetti.
Akka xabattuu profeeshinaalaatti imallishee kan eegale wayita godina ishee bakka bu'uun xabatuutti ture. Waltajjichi ija warra xabattoota filatanii akka galtus gargaare. Isaan boodas naannoo Kibbaa bakka bu'uun sadarkaa Itoophiyaatti dorgommii Adaamaatti gaggeefame akka xabattu filatamte.
Leenjisaan garee kubbaa miilaa dubartoota Hawaasaa yeroo sanaa Yooseef Gabrawold turan Loozaa kan filatan. Imalli ishees Pirimiyeerii liigii Itoophiyaa gahe.
Loozaan Hawasaa waliin carraa mo'achu argachu baattullee turtii ishee waggoota lamaatiin xabattuu goolii galchuun beekamte turte.
Isaan boodas Hawasaa irraa kara Daddabiititti imalte.
Daddabiit waliinis hanga barrengadaatti waggoota afuriif turte. Waggoota kanneen keessattis goolii lakkofsisuun kanneen beekaman keessa turte. ''Amma Daddabiit diigameera. kanaanis nuti gaddi nutti dhagahameera,'' jetti.
Imala gara Siwiidiiniitti
Loozaan osoo Daddabiit hin diigamiin dura ture yaaliidhaaf gara Swiidiin kan deemte. ''Daddabiit osuman jiruu Priimeer liigiin xumuramuuf xabni lama qofti osuu hafuun gara Swiidiin deeme'' jetti.
Garuu attamiin gara Siwiidiin imaluu dandeesse?
''Namichi Laars jedhamuufi lammii Swiidiin ta'e tokko haati warraasaa lammii Itoophiyaa waan taateef ni dhufa ture. Waa'een kiyya itti himamnaan arguun qaba jedhe wayitan xabadhu dowwate. Isaan boodas anaa fi duree garee biyyaaleessaa kan duraa kan taatee Tuttuu Balaayi Swiidiin deemne shaakkallii yaalii akka taasifnuu haala nuuf mijeesse. Achiinis kilaboota Swidinitti argaman (Rozaan gaardi fi PitiyaaIF) keessa baatii afuriif nu tursiise.
Isaan boodas federeshiniin kubbaa miilaa Swiidiin hayyama baatii lamaa nuuf kenne. Achinis akkuma dorgommiin dubartoota biyyattii xumurameen deebine.
''baatiin Amajjii yeroo dorgommiin dubartoota Swiidiin itti eegalu yoo ta'u, nuti garuu deebine deemu hin dendeenye sababii hirrina maallaqaatiin.''
''Dubartoota Awuroppaadhaa taate yoo mallatteesisan baasii dabalataa hinqaban. Dubartoota ardii biraatii dhaqaniif kanfaltii hayyama hojii kanfalu barbaachisa. Kilabichi kana gochu hindandeenye. Kanaafu osuma dandeettii qabnu hanqina maallaqaatiin hafnes'' jetti.
Gama biraatiin ammo 'humni isaan daqiiqaa jalqabaarratti qabaniifi kan daqiiqaa 90 waluma fakkaataadha. Rakkinni keenya kubbaa dadhabu osoo hintaane saffisa dhabiinsa. Kanan garee Swiidinitti itti inaaffes kana ture,'' jetti Loozaan.
Loozaan shaakkallii baatii tokkoof gara Tarkiis deemte turte. Akka Loozaan jettuutti kanfaltiin kilabni Tarki dhiyeesseef kan Itoophiyaatiinu gadi ture.
Image Copyright @LozaAbera @LozaAbera
Imalli gareen biyyaalessaa Loozaa kan kilabiitiin dura.
''Yeroonsaa tibba gareen dubartotaa biyyaaleessaa xaba waancaa Afriikaatiif itti darban ture. 'Abdii Luusii' jedhamnee shamarran guddattoonni 70n baatii tokkoof akka leenjiinuuf waamamne. Nu keessaas ijoolleen 8 garee biyyaaleessaaf filataman. Anis isaan keessaa tokkoon ture. Kun kan ta'ees osoon garee Hawaasaatiif xabachuu hin eegaluun gannaa tokko duraa ture.''
Loozaanis akkuma garee biyyaalessaatiif filatamteen garee keessaa hirrifamtee turte. Waggaa tokkoon booda leenjisaa Siyyuum Kabadaatiin gareetti deebiifamte.
Loozaan garee biyyaalessaa keessatti gooliiwwan 23 lakkofsifteen Luusii keessaatti sadarkaa galchii gooliitiin olaantummaa qabatte.
Akka carraa ta'ee garee biyyaaleessaa waliin waancaaf mo'achu baattullee turtishee garee guddattota waggaa 20 gadii waliin dabarsite yoom iyyuu hindagattu.
Luusiin waancaa addunyaatii darbuu dadhabdus dorgommiiwwan taasifamaniin dandeetti kiyya ittiin ilaaluuf na gargaareera jetti Loozaan.
Keessattuu uffannaa garee biyyaalessaa uffachuun deeggartoota fulduratti xabachuun miira addaa namatti uuma kan jettu Loozaan, goolii wayita lakkoofsiftummoo gamachuunsaa daangaa akka hinqabaannee himti.
Loozaan dhaloonni ishee seenaa akka hojjatu amanti. ''Kaayyoon kiyya biyya bakka bu'ee waancaa Afriikaaf xabachuu, akkasumas shaampiyoonaa ta'udha. Waltajiiwwan akka biyyaatti xabatamu irrattis dhaloonni kiyya qabxii olaanaa akka galmeessu abdii guutuun qaba. Waaqa waliinis kun fiixaan baha,'' jetti.
Kanfaltiin garee dubartootaa akkamiin ibsama?
Wayita ammaa kanatti hojiiwwan galii olaanaa qaban keessaa tokko kubbaa miilaa (kan dhiiraati) jedhama jetti.
Kanfaltii gare dubartootaa ilaalchisuun ''kan dhiiraafi dubartootaa hanga lafti samiirraa fagaatu garaa garummaa qaba. Walittu hindhufu. Ta'us ammo kan duriirra amma fooyyee qaba galanni rabbiif haa ta'u. Yoo kan dhiiraatiin wal bira qabame garuu walitti hindhufu,'' jechuun ture haala kanfaltti kan ibsite.
Duri kan mallattoo jedhamee nuuf kanfalama ture. Amma garuu ji'aan hiramee haala mindaatiin argachaa jirra. Kunis ammantaan argannu akka xiqqatu taasisa. Waa'ee kanfaltii yeroo baayyee dubbatameera,'' jechuun ibsiti Loozaan.
Dirree Leeliisootii hanga Siwiidiin
Loozaanis sadarkaa amma geessee keessatti gaheen namoota naannoo ishee jiran taasisan olaanaa ta'u himti. Maatii isheetii kaasee hanga leenjisaa Yoseef Gabrawald, deeggartoota Daddabiitii hanga leenjisaa Siyum Kabbadaa hedduu tarreessun galateeffatti.
Bakka amma geesse kana ni qaqabdi jedhee kan yaade jiraachu baatulleen Loozaan garuu ijoolummaa kiyyaa qabee akka kubbaa miilaatiin biyya kiyya bakka bu'ee xabadhu natti mulata ture jetti.
''Waan tokko raawwachuun dura fedhii qabaachuun murteessaadha. Kubbaa miilaa xabachuuf fedhii qabaachu ittaansees dadhabbii malee cimanii hojjachu gaafata. Kan biraas yoo ta'e akkasuma osoo abdii hinkutne bakka yaadamu gahuuf cimanii hojjachuun barbaachisaa ta'u of amansiisuu barbaachisaadha,'' jetti.
Akkasumas hojii kabajuun jechuunis naamusa oggummaan sun gaafatu guutuun fiixaan bahiinsaaf murteessadha jetti Loozaan. Kana malees yeroo isheefi gareenshii Luusiin mo'atanii itti gammadan cimsitee eegaa akka jirtu dubbatti.
Preezidant Saahilawarq: Hirmaannaa dubartoonni ispoortii keessatti qaban cimsuuf bajata barbaachisa jedhan